Izindaba - Isihlungi sensimbi engagqwali yomkhiqizi @ ukujiya kwesikrini esinyene
Into yokuhlunga ekhiqizwa ngumakhi wezinto zokuhlunga insimbi engagqwali inezinhlobonhlobo zezinhlelo zokusebenza, futhi imikhiqizo eminingi isetshenziswa njengesihlungi semidiya. Isici sesihlungi esikhiqizwe ngumenzi wesici sensimbi yensimbi engagqwali senziwe ngocingo olunocingo; kwesinye isikhathi maphakathi kwesikrini kusindwe ngocingo oluminyene ukuthuthukisa amandla. Ekuqaleni, into yokuhlunga ekhiqizwa umkhiqizi wezinto zokuhlunga insimbi engagqwali ibisetshenziselwa ukuhlunga igesi kuphela. Isizathu esinganakwa sokuhlunga oketshezi ukuthi usayizi wento yokuhlunga awuzinzile futhi uzonwebeka ngaphansi kwengcindezi enkulu yokuhlunga. Kodwa-ke, eminyakeni yamuva nje, ubuchwepheshe bezinto ezihlungiwe eziqinisiwe buye benza inqubekela phambili enkulu. Isibonelo, ukuze kuthuthukiswe ukuqina kobukhulu bento yokuhlunga, kusetshenziswa ubuchwepheshe obulandelayo:
Phezulu kwento yokuhlunga, kufakwa i-micro denier fiber ebusweni besihlungi; ingaphezulu lokuzwayo liphathwa ngokuqeda bushelelezi; futhi (3) kusetshenziswa indwangu eqinisiwe engcono futhi enamandla.
Ngemuva kokusebenzisa lobu buchwepheshe obusha, umkhawulo wohlelo lokusebenza lwento yokuhlunga uzonwetshwa. Ingasetshenziswa hhayi kuphela kusihlungi sokususa uthuli esisebenza kahle kakhulu, kepha futhi kusihlungi se-vacuum liquid (njengohlobo lwe-disc, uhlobo lwesigubhu nesihlungi sebhande lohlobo oluvundlile). Ngaphezu kwalokho, into yokuhlunga ekhiqizwa ngumenzi wesihlungi sebanga lensimbi engenasici isetshenziswe kusihlungi sengcindezi yesitsha ukuhlunga ukudla nemithi.